HARGEYSA, Somaliland - Madaxweynaha maamulka Soomaalida dalka Itoobiya, Mustafa Maxamed Cumar [Cagjar] ayaa u tagey Somaliland ka qeybgalka munaasabad lagu dhagax-dhigay wadada xiriirisa Berbera iyo Wajaale.
Mashruucan lagu dhisayo jidka, oo ku kacaya malaayiin dollar ayaa qeyb ka ah heshiiska Dekadda Berbera, oo sanadkii tagey Dubai ku kala saxiixdeen Somaliland, DP World iyo Itoobiya.
DP World ayaa maalgashi $442 million ku sameynaysa Dekadda Berbera, oo ballaarin ku sameynayso, iyadoo u dhisaysa qeyb ay kusoo xirtaan maraakiibta waaweyne ee Kunteenaradda, waxaana ay dhisaysaa wadada tageysa degmada Wajaale, ee Itoobiya.
Mustafe Cagjar ayaa kula kulmay Madaxtooyadda Hargeysa Muuse Biixi Cabdi, Madaxweynaha Somaliland oo ay kawada hadleen arrimo dhowr ah, oo ay kamid tahay ballaarinta isdhex-galka ganacsi ee dowlad degaanka iyo Somaliland.
Ballaarinta Dekadda Berbera iyo wadada Wajaale ayaa muhiim u ah Ganacsatada Itoobiya, oo wax ka dhaafsan doono, kana soo dejisanaya Dekadda, iyadoo dhaqaalaha laga helo adeegyadda DP World bixinayso ay la wadaagayso Somaliland iyo Addis Ababa.
DP World ayaa qaadanaysa dakhliga ka baxsan canshuuraha Dekadda Berbera 51%, Somaliland 30% halk Itoobiya helayso 19%.
Itoobiya oo ay shacabkeedu gaarayaan 100-milyan oo qof ayaanan lahayn wax bad ah, iyadoo dalkan geeska Africa ku yaalla uu sameynayo kobac dhaqaale oo xooggan, waxaana uu ku tiirsan yahay Dekadaha dalalka deriska la ah.
Imaaraadka oo u yeeray Madaxweynaha Somaliland [Daawo]
Somaliland 09.03.2019. 16:18